एक दिनमै प’रिवर्तन बाबु छोराको: श्रीमतीलाई सम्झेर धर-धरी रो’ए (हेर्नुस् भि,डियो) – पुरा पढ्नुहोस्……
हिजो सामाजिक संजालमा एउटा बुवाले आफ्नो छोरालाई आमाले झैं पिठ्युमा कपडाले बाँधेर रिक्शा चलाईरहेको फोटो निकै भाइरल भयो । फोटो भाइरल भएको २४ घण्टा नबित्दै कैलालका अर्जुन बिक र उनका छोराका लागि अहिले सहयोग आएको छ । सधैं आफैँ आमा बनेर काँधमा लुगाले बाँधेर काममा जाने अर्जुनको छोराका लागि आज बच्चा बोक्ने झोला “बेबी क्यारियर” उपहार आएको छ ।
साथमा अर्जुनका छोराले नयाँ कपडा पनि पाएका छन् । आज उनी श्रीमतीलाई सम्झेर धरधरी रोएका छन् । सँगै जीउने सँगै म’र्ने कसम खाएकी श्रीमतीले दुधे बालकलाई छोडेर चट्टक्कै माया मा’रेर गएपछि आज उनले आँशु थाम्न सकेनन् । देश तथा विदेशबाट सहयोगी मनहरुले उनले छोराका लागि गरेको संघर्ष देखेर सहयोगको हात अगाडी बढाउनु भएको छ ।
कैलाली घर भई हाल काठमाडौँमा ज्याला मजदुरी गर्दै आएका अर्जुन बिक एक छोराका बाबु हुन् । श्रीमतीले छोरा ४ महिनाको हुँदा छोडेर गएपछि अहिले अर्जुनले आफ्ना छोरालाई आमा र बाबा दुवै बनेर हुर्काई रहेका छन् ।
छोराको उज्ज्वल भबिष्यका लागि दिन रात परिश्रम गरिरहेका छन् । अर्जुन बिक दैनिक रुपमा यसरी नै आफ्नो सन्तान बोकेर ठेलामा समान ढुवानी सेवा गर्छन् । सन्तान प्रतिको अथाह माया तथा जिम्मेवारी एउटा बाबाको परिश्रममा देखिने रहेछ। ‬त्यसको उदाहरण हुन्, अर्जुन ।उनलाई अझौ पनि तपाईहरुको साथ र सहयोगको खाँचो छ ।
हेर्नुस् आमाको काख नपाएको छोराका लागि एउटा बाबुले गरेको संघर्ष र बाबु छोराको जीवनमा आएको परिवर्तन भिडियोमा :
Prevअशोक दर्जीकी फुपू र बुबा मध्यरातमा रुँ,दै मिडियामा, आखिर के भयो ? (भिडियो सहित)
Nextनेपालमै पहिलोपटक प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना सं,क्रमितको उपचार, भयो च’मत्कारिक सुधार
यति मिठो स्वरकी १६ वर्षीय सम्झना, बुवाले अर्कै लिएर हिँडे, आमाले गिट्टी कुटेर हुर्काएकी सम्झनाको सबैलाई चकित पार्ने स्वर -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
“माया गरेर धेरैले ‘रबि दाइ’ भनेपनि म चाहिँ परिवारकै कान्छो भाई” रवी लामिछानेको यसपालीको भाटिका हेर्नुहोस तस्विरहरू..
कृष्ण ओलीलाई भेट्दा बिराज भट्ट रोए ! ११ लाख सहयोग बुझाउँदै भने-तिमी रियल हिरो हौ-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
मेनुका पौडेलले गाएको अर्को हिन्दी गीतले भारतमा तरंग – हेर्नुहोस(भिडियो सहित)